प्रधानमन्त्री ओली अरु ५० वर्ष बाँच्‍नुपर्छ ! « Pathibhar Online
गाेबिन्द थापा नेपालमा ६८ वर्षका एक मानिस छन् जो बिहान जुरुक्क उठेदेखि राति १२ बजेसम्म काम गर्छन् । उनले अल्छी लाग्यो, थकाइ लाग्यो भनेको कहिल्यै सुन्न पाइएन । आराम गर्छु भनेको कहिल्यै सुन्न पाइएन । रातोदिन खट्ने, जतिबेला पनि जनता र देशको भलाई मात्र सोचेर बस्ने अनि भलाईको काम मात्र गर्ने ती मानिस हुन्– केपी शर्मा ओली ।
मदन भण्डारीको भनाई छ– राजनीतिमा थकाई भन्ने शब्द हुँदैन । यो आदर्श भनाई केपी ओलीले निरन्तर अनुशरण गरिरहेका छन् ।
केही दिन अघि राति यो पंक्तिकारलाई धेरै महानुभावहरुको फोन आयो । सबैको प्रश्न थियो– केपी ओली साँच्चै सिकिस्त बन्नुभएको हो ? यस्तो प्रश्नको जवाफ दिँदादिँदा हैरान नै भइयो ।
त्यस साँझ केही मिडियाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिकिस्त विरामी बनाइदिएछ । त्यसपछि अरु कतिपय मिडियाले थपथाप पार्दै, मरमसला हाल्दै झन सिकिस्त भएको समाचार दिएछ । त्यसपछि एउटा मिडियाले त प्रधानमन्त्री सिकिस्त भएको भनी रमाउँदै समाचार हालेछ र राति नै एअर एम्बुलेन्सबाट सिंगापुर लैजान लागिएको लेखेछ ।
त्यसपछि हल्ला फैलियो । चिन्ताको लहर सुरु भयो । उता एउटा सानो जमातमा चाहिँ खुसीको लहर फैलिएछ । केही समयपछि नै समाचार असत्य सावित भएपछि त्यस्तो जमातमा कति उदासी छायो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । रमाउँदै प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थ भएको समाचार लेख्ने कुनै पनि मिडियाले क्षमा मागेको देखिएन ।
केपी ओली मात्र होइन, यो धरतीका हरेक प्राणीलाई रोग लाग्छ, स्वास्थ्य बिग्रन्छ । हरेक मानिस मर्छ । यो शाश्वत हो । तर, यसो भन्दैमा कोही मानिस मरिहालोस् भनेर कामना र प्रार्थना गर्नु चाहिँ निर्लज्जता हो, घोर अमानवीय हो ।
६८ वर्ष उमेरका मानिसलाई कुनै न कुनै रोग लागेको हुन्छ । यो उमेरसम्म रोगविहीन मानिस धरतीमा विरलै होलान् । केपी ओली चाहिँ रोगलाई जितेका मानिस हुन् ।
काठमाडौं गणतन्त्र घोषणा भएको एक दशक पनि बित्न नपाउँदै नेपालका हिन्दू राष्ट्रवादी पक्षले राजासहितको लोकतान्त्रिक